Nyochaa: 'Nkatọ na Ihe Mere na Nzuzo nke Puente Viejo' | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Nkọwa na akụkọ banyere ihe nzuzo nke Puente Viejo bụ akwụkwọ e bipụtara na Akwụkwọ Altera ebe Jose Ignacio Salazar Carlos de Vergara, onye nta akụkọ na onye ọrụ redio a ma ama na San Sebastián, na-agbada ma nyochaa isi nke usoro ihe ịga nke ọma a setịpụrụ na mmalite nke narị afọ 3 nke Antena 2011 agbasawo kemgbe February XNUMX.
N'ime akwụkwọ a, José Ignacio Salazar na-anakọta ụfọdụ akwụkwọ akụkọ bipụtara na blog ya ma nyochaa omume, ọnọdụ na omume nke ndụ na mgbanwe nke ndị bi na obere obodo Spanish ebe ihe niile ga-ekwe omume. Ya mere, obughi akwukwo n’onwe ya nke meputara usoro nke usoro a ma obu akuku ya, kama o bu otu akwukwo edeputara nke onye dere ya gosiputara uche ya na uche ya.
"José Ignacio Salazar nwere ọkachamara na nyocha nke ọrụ nke ihe karịrị mmadụ 100 na-arụ kwa ụbọchị"ha na-ekwu Michael Peter y Agha Aurora, onye edemede edemede nke usoro a, na mbido akwụkwọ a. Ha gbakwunye: "Ezi obi, kwụ ọtọ ma bụrụ nke a na-apụghị ịkọwa akọwa, ezigbo agwa okwu ya bụ na ọ nweghị onye nwere mmasị."
na fans nke Nzuzo nke Puente Viejo Ga - ahụ n’akwụkwọ a ọmarịcha ọgụgụ iji gụọ ala nke mkpụrụedemede ahụ, zute ndị na-eme ihe nkiri na-egwu ha ma daba n’ime ihe ọmụma nke oge dịla anya, mana nke ahụ ahapụla akara ya n’akụkọ ihe mere eme na mmetụta ya n'ezie.
Akwụkwọ a malitere site na a Okwu mmalite na-ahụ maka ndị edemede nke usoro, dị ka anyị kwurula. Mgbe ahụ mmeghe Ọ gụnyere ngosipụta nke onye dere ya na ihe kpatara iji kwado okike nke akwụkwọ a, yana isiakwụkwọ ole na ole gbasara usoro izugbe ahụ na ndị na-eme ihe nkiri na ndị na-eme ihe nkiri ndị sonyere n'usoro ahụ. Okwesiri igosiputa olu onwe ya na akwukwo José Ignacio Salazar na akwukwo nke obula, nke uzo di iche, na nke itinye aka nke ya na ndi mmadu na ekwu banyere ya.
Ngalaba na-esote na-achịkọta ihe kacha mma edemede nke José Ignacio Salazar dere na blọọgụ ya, ha niile nwere nnukwu aha na-atụ aro, nke na-eme ka onye na-agụ ya cheta ma cheta ọnọdụ ndị ahụ nwetara na usoro ahụ. Ọ gwụla ma Salazar etinyela ụbọchị nke mbipụta nke ederede mbụ na blog. Ọtụtụ ga-atụ uche na akwụkwọ ahụ anaghị etinye ihe oyiyi site na usoro, nke ọ na-eme na ntanetị. Agbanyeghị, nke a enweghi ike maka ebumnuche ikike onyonyo. N'ọnọdụ ọ bụla, a na-ahọpụta akụkụ Akwụkwọ Nsọ na nnukwu ihe ịga nke ọma, ma dee ya n'ụdị nke onye na-ede akwụkwọ akụkọ a na onye ode akwụkwọ nwere ọgụgụ isi, nke gosipụtara etu o si mara nke ọma na mpụga nke akụkọ a na-adọrọ mmasị.
Anyị na-edegharị otu akwụkwọ 'Nkọwa na akụkọ banyere ihe nzuzo nke Puente Viejo'
Site n'ikike nke Akwụkwọ Altera, anyị nwere otu Nkọwa na akụkọ banyere ihe nzuzo nke Puente Viejo nke José Ignacio Salazar sere.
Ikere òkè dị mfe.
Nke mbụ, ị ga-abụrịrị onye na-eso ụzọ Actualidad Literatura Twitter. Ọ bụrụ n’ị esoghị anyị, ị nwere ike ime nke a site na iji bọtịnụ na-esonụ.
Nke abụọ, jiri akara hashtag #ALiteraturaPuenteViejo biputere tweet ma ọ bụ jiri bọtịnụ na-esonụ.
A ga-ekenye onye ọ bụla biputere tweet dị ka nọmba na eserese ahụ. N'ime ndị niile so na ya, anyị ga-ahọrọ ọnụọgụ nke onye mmeri na random site na ngwá ọrụ random.org
Ihe osise a ga-emeghe ruo mgbe na Wednesde, Disemba 10, 2014, n’elekere 23:59 nke ehihie. Na-esote ụbọchị, mepụta raffle ahụ. Onye mmeri nke akwukwo a ga-ebip? ta a post na anyị ga-akpọtụrụ ya ma ọ bụ zitere gị akwụkwọ zuru oke nke Nkọwa na akụkọ banyere ihe nzuzo nke Puente Viejo. Ọ dị mkpa na onye mmeri ga-aza ozi ahụ na anyị ga-ezitere ya naanị site na Twitter n'ime ụbọchị 15 nke eserese ahụ.
Na mgbakwunye, ọ dị mkpa na profaịlụ nke ndị sonyere bụ ọha na eze iji nwee ike inyocha tweets gị, ma ọ bụghị na ha agaghị agụta maka eserese ahụ.
Dochọrọ otu nyocha na Ihe E Mere banyere Ihe Nzuzo nke Puente Viejo maka onwe gị ma ọ bụ nye onye bụ onye na-akwado usoro a? Echefula ya ma sonye. Kechioma!
Anyị nwere onye mmeri nke akwụkwọ ahụ.
Onye ochioma bu Vero @ vventur2 (Barcelona).
!! Ndeewonu !! Anyị ga-akpọtụrụ gị iji zitere gị nke gị Nkọwa na akụkọ banyere Isi Nzuzo nke Puente Viejo.
Maka ndị ọzọ, daalụ maka isonye.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Akwụkwọ » Nyochaa: 'Nkọwa na akụkọ banyere ihe nzuzo nke Puente Viejo'